Chernobyl-एक अैतिहासिक आणविक प्रकोप(Nuclear Disaster)/Summary of book in Nepali - LweoNepal
Posted on: September 16, 2020 Last updated on: September 22, 2020 Comments:0Categorized in: Learn, Recent Posts by Subscribers, Tech, वातावरण, विज्ञान Written by: Admin
सेर्नोबिल प्रकोप शनिबार २६ अप्रिल १९८६ मा एक आणविक दुर्घटनाबाट भएको हो, जुन यूक्रेनी एसएसआरको उत्तरमा रहेको Pripyat भन्ने सहर नजिकै Chernobyl आणविक ऊर्जा प्लान्टको4नम्बर रिएक्टरमा भएको थियो। यो इतिहासको सबैभन्दा नराम्रो (आणविक प्रकोप) Nuclear Disaster मानिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय nuclear energy accidents मापनमा अधिकतम गम्भीरताका हिसाबले सातौ तहमा बिभाजित भएको छ – यो स्तर को प्रकोप मात्र दुईवटा आणविक उर्जा दुर्घटनाहरूले गर्दा भएको छ, अर्को जापानको २०११ Fukushima Dai-ichi आणविक प्रकोप हो।
How do Nuclear Power Plant Work
Summary of the book in Nepali /”Chernobyl” पुस्तकको नेपालीमा सारांश
“Chernobyl” पुस्तकले मानव इतिहासको सबैभन्दा नराम्रो आणविक आपतकाल र त्यसपछिका घटनाहरूको विवरणहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै केही रोचक र महत्त्वपूर्ण इतिहास, विज्ञान र नेतृत्वको पाठ सिकाउँछ।
Chernobyl विस्फोटले छोडेको ५ करोड curiesको रेडिएसनल ५०० हिरोशिमा बमको बराबर थियो।
चेर्नोबिल आणविक शक्तिको विस्फोटन यति शक्तिशाली थियो कि, Uranium पग्लिएर त्यसको उर्जाको कारण, चेर्नोबिलको4नम्बर रिएक्टरको २००-टनको छत समेत भत्कायो। सबैभन्दा खराब कुरा के हो भने यसले वातावरण र वरपरका क्षेत्रहरूमा विकिरण फैल्यायो र असंख्य जीवनलाई असर गर्यो र गर्दैछ।
तर यो विपत्ति किन भयो, जुन इतिहासमा सबैभन्दा डरलाग्दो आणविक उर्जा प्रकोप बन्यो ? र यो हुनु अघि र पछिको घटनाहरूको क्रमबाट हामी के सिक्न सक्छौं ?
र यि कुराहरु बारे, तपाईंले Serhii Plokhy’sको Chernobyl: The History ofaNuclear Catastrophe पुस्तकमा फेला पार्नुहुनेछ। यस पुस्तकमा समस्याहरूको गम्भीरतालाई इन्कार गर्नु भन्दा समस्याहरुलाई प्रबन्ध गर्ने र नेतृत्व लिने कार्य बारेमा धेरै विस्तृत पाठहरु छन्।
यी मलाई मनपर्ने पाठहरू हुन् , जुन मैले यस पुस्तकबाट सिकेः
आणविक प्रकोपको घटनाहरूको श्रृंखला (Safety Test) सुरक्षा परीक्षणको साथ शुरू भएको थियो।
खराब नेतृत्व, अक्षमता, र रिएक्टरको डिजाइनमा त्रुटि, यि सबै विस्फोटको लागि जिम्मेवार थिए ।
Chernobyl disasterको कारण भएको मृत्यु संख्या केवल ३१ जानाको थियो, तर दर्जनौं र हुनसक्छ सयौं मानिसहरू यसको कारणले ग्रस्त थए।
पाठ १: सुरक्षा परीक्षण नै आणविक प्रकोपको लागि जिम्यवार पहिलो कदम थियो।
आणविक पावर प्लान्टसँग प्रशस्त वातावरणिय रुपमा स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ।र यो nuclear fission reaction बाट हुन्छ। यो Reaction युरेनियम जस्ता रसायनहरूको प्रयोगले सजिलो सँग गरिन्छ।
ईन्जिनियरहरूले पानी र “Control Rod” को साथ Reaction नियन्त्रण गर्दछन्, जसले uranium जस्ता रसायन भित्रका तत्वहरूको nutreonहरुलाई Absorb गरेर Reactionको rate कम गर्दछ । जब यी Rod रिएक्टर भित्र छन्, Reaction ढिलो हुन्छ।
तर यी सुविधाहरू खतरा बिना भने पाउन सकिन्न। केहि केसहरूमा, Bombing जस्तै, रिएक्टरमा उर्जाको कमि वा सञ्चालन गर्नमा गल्तिको कारण विनाशकारी विफलताहरू आईलाग्न सक्छ।
यो एउटा कारण हो कि Chernobylपावर प्लान्टका कर्मचारीहरूले सुरक्षा का लागि यसको परीक्षण गर्नु महत्वपूर्ण थियो। तिनीहरूको उद्देश्य, यदि यस रिएक्टरले थोरै समयको लागि उर्जा/power (electrical or solar or any) बिना बस्नु पर्यो भने प्लान्टले Uranium setupले कसरी काम गर्नेछ भनेर हेर्नु थियो। तिनीहरूसँग ब्याकअप जेनरेटरहरू थिए, तर Power restore/पुनर्स्थापन हुनको लागि 45 सेकेन्ड समाय लाग्थो, जुन् एकदम् लामो समए हो।
ब्याकअप पावर प्रणाली सुरु भएको बेलामा रियाक्टरले सुरक्षित रूपमा Power दिन सक्छ वा सक्दैन भनेर पत्ता लगाउनु उनिहरुको उद्देश्य थियो। त्यसैले Power प्लान्टका कामदारहरूले जानाजानी बिजुली इनपुट कम गरिदिए। तिनीहरूले एकैसाथ प्लान्टमा इनपुट पावर कम गरे र रिएक्टरबाट Control rod पनि हटाइदिए।
तर अप्रिल २, १९८६ को प्रारम्भिक घडीमा शुरू भएको यो परीक्षा एकदम विनाशकारी हुन पग्यो।
पाठ २: विष्फोट, एउटा घमण्डी नेता, असक्षम स्टाफ, र युएसएसआरले ढाकेको एक प्रमुख डिजाइनको त्रुटिको कारण भएको थियो।
यो शुक्रबार दिउँसोको दिन हो, रातका कर्मचारी टोलीले Chernobylमा आफ्नो working shift सुरु गर्दैछन्। यद्यपि नेता, Yuri Tregub भने त्यो रात गर्न लागिएको परीक्ष्ण प्रक्रिया बारे राम्रोसँग
ज्ञान थएन। भाग्यबश, वा बरु सायद दुर्भाग्यवश, Anatoly Dyatlov, उप-मुख्य अभियंता त्यहाँ हुन लागेको परीक्ष्णको निरीक्षण गर्न आएका थिए।
१० बजे सम्ममा Teamले Safety Test अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, र ११ बजे Dyatlov पनि आइपुगेका थिए। Tregubले सुरक्षाको लागि केहि प्रश्न सोधेपनि, Dyatlovले उनका प्रश्नहरू खारेज गरे। यि नेतिले रिएक्टरमा हुनसक्ने घातक डिजाइन त्रुटिहरूका बारे थाहानपाई, अनिश्चितताहरूको वास्ता नगरी काम गरिरहनको लागि टिमलाई दबाब दिए। रिएक्टरमा शक्ति कम गर्दै, तिनीहरूले पनि टेस्ट गर्न शुरू गरे।
Dyatlov ले उनीहरूको कौतूहलताको बाबजुद चाँडो काम नगरेकोले चालक दललाई गाली गरिरेका थिए। जब मेशिनले आफैंमा शक्ति कायम गर्न सकेन, तब पनि Dyatlov ले भने चालक दललाई Power घटाउन र Control rod हटाउन लगाए। अन्तत: रिएक्टरमा केवल ९वटा control rod मात्र बाकि थियो।
Control rod हटाएकालेआणविक प्रतिक्रियाहरूको विशाल मात्राले रिएक्टरको सबै पानीलाई बाफमा उमाल्न थाल्यो। तापक्रममा भएको द्रुत बृद्धिले शक्ति बढायो र Leonid Totunovले आपतकालिन शटडाउन बटन थिचेर सबै Control Rodलाई फेरि भित्र पठाईदिए।
त्यस RBMK रिएक्टर, जोखिमपूर्ण सेटअप र त्रुटिको कारण विश्वमा कतै पनि कानुनी थिएन। control rodको अन्तिमका टुक्राहरूमा ग्रेफाइट थियो, जसले Reaction ढिलो बनाउनुको सट्टा झन Reactivity बडाउँदछ। जब control rodका अन्तमा भएका Graphiteहरू पहिले नै खतरनाक कोरमा(रिएक्टरमा) गए, यसले Reaction अझ उच्च बनायो।
यसै कारण रिएक्टर कोरमा दुई विस्फोटहरू भए र सबैतिर रेडियोएक्टिभ तत्व फैलिए।
पाठ ३: प्रकोप पछि गर्नुपर्ने आधिकारिक प्रतिक्रिया ढिलो थियो, जसले गर्दा रेडिएसनको प्रभावबाट धेरै मानिसहरु चाँडैनै मरे।
दमकल विभाग घटना स्थलमा सबै भन्दा पहिला पुगेका थिए। सानो आगोहरू जताततै थिए, तर तिनीहरूले पहिला भवनको छानामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्‍यो। उनीहरूले लगाएका मानक सुरक्षात्मक गियरले (standard protective gearले) खतरनाक विकिरणबाट उनीहरूको रक्षा गर्न सकेन।
रRadioactive तातोका कारण उनीहरुका जुत्ता पग्लिन थाले। छतमा ग्रेफाइटका टुक्राहरू फैलिएका थिए, र दमकलकर्मीहरूले ती के हुन् भनेर नजानिकन कदम अगाडि बडाउन थाले। ती मध्ये एकले ट्रकको टायरमा एउटा धातु भेट्टाए र त्यसलाई हटाउन खोज्दा उनको हातको छाला नै पग्लियो।
उनिहरु Radiationको कारण तीव्र गतिमा बिरामी हुन बेर लागेन। उनीहरू मध्ये धेरैले पछि Radiationको कारण मर्नेपनि छन्।
ती मानिसहरूले भोग्नुपरेको डरलाग्दो अवस्था भ्रष्ट नेतृत्वको परिणाम हो। Power प्लान्टमा काम गर्ने कर्हमचारिहरूले विश्वास गर्न सकेनन् कि रिएक्टरमा विस्फोट भएको थियो वा त्यो हुन पनि सक्छ! , त्यसैले तिनीहरूले आधिकारीलाई बताएन कि रिर्याक्टर बिग्रिएको थियो। नियन्त्रण कोठामा भएकाहरूले सोचे कि केवल टर्बाइन हलमा मात्र क्षति भएकोछ।
उच्च आधिकारीहरु पनि अचम्मित थिए। Power प्लान्टको निर्देशकले पनि Kyivका नेताहरूलाई एक note पठाए जसमा केवल रिर्याक्टर हल बिग्रिएको भनेर उल्लिखित थियो।
उनले तिनीहरूलाई भने कि विकिरण स्तर १,००० माइक्रो roentgeको थिए यद्यपि उनलाई थाहा थियो कि यो उनीहरूका उपकरणहरूले मापन गर्न सक्ने अधिकतम क्षमता हो र Radiation १,००० माइक्रो क्षमताroentge भन्दा पक्कै धेरै थियो।उनले एक कर्मचारिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरे जो सँग राम्रो उपकरण थियो, र त्यस उपकरणमा Reading 55,००० माइक्रो roentge देखाएको थियो।
त्यसैले, कम Reading प्रश्तुत गरेकाले सम्बन्धित निकाए द्वार प्रकोप प्रति प्रतिक्रिया ढिलो आयो। केवल प्रारम्भिक प्रतिक्रियाकर्ताहरूले मात्र आफ्नो जीवन गुमाएनन्, तर अन्य अनगिन्तीहरूले पनि गुमाउनुपर्यो। आगोले tonsका-tonsको मात्रामा रेडियोएक्टिभ तत्वलाई वायुमण्डलमा पुर्‍यायो र हामी केवल यो अनुमान मात्र गर्न सक्दछौं कि, कति जना मानिसहरु अहिले पनि त्यस प्रकोपले गर्दा क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोगबाट संक्रमित भैरहेका छन्।
Previous Post THE MARDI HIMAL TREK – COMPLETE GUIDE AND ITINERARY-byaNepali Trekker
Next Post Leadership Strategy And Tactics- नेपालीमा सारांश